Ka Fiican Magaca 9, magaca faylasha si toos ah | Waxaan ka socdaa mac
Ka Wanaagsan Magac 9, magaca faylasha si otomaatig ah
Magacaabista magacyada faylasha 'Mac' waa mid ka mid ah howlaha aan sifiican loo dhameystirin. Magacaabista hal feyl waa fududahay, kaliya waa inaad doorataa feylka oo riix Gali, si otomatik ah ayaad ubadali kartaa magaca, ixtiraamka kordhinta. Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad ku dhufato laba jeer (maahan inta badan) magaca faylka waxaadna yeelan doontaa natiijo isku mid ah. Laakiin haddii ay timaado in magacyada loo badalo tiro ahaan tiro badan, waa inaad miciinsataa ku sameysid qoraal Automator inuu awoodo inuu sameeyo. Ma ahan in otomaatiggu aad u dhib badan yahay in la isticmaalo, laakiin runtu waxay tahay in waligeed aysan ahayn hawl fudud. Beddel noocee ah ayaan haysannaa? Bakhaarka 'App App' ee 'Mac App Store' waxaa ku yaal waxyaabo kale oo badan, laakiin feker ahaanteyda waxa ugu fiican dhammaantood waa "Better Rename 9", oo horey loo oran jiray "Magac Bixiye Ka Fiican".
Hawlgalka codsigu waa mid fudud, waxay ka kooban tahay oo kaliya jiidaya faylasha (ama fayl) daaqadda, ama astaanta dalabka ee Dock, iyo waxay si otomaatig ah kuugu deeqi doontaa ikhtiyaariyada magac beddelka. Hubi haddii aad rabto inaad ka shaqeyso faylasha (Faylasha), fayllada (Folders) ama xitaa hoosaadyada iyo waxyaabaha ku jira (Subfolders-ka iyo waxyaabaha ku jira).
Xullo shuruudaha aad rabto inaad ku bedesho magaca. Fursadaha ayaa badan, laga bilaabo xulashooyinka gacanta sida qoraalka, tirooyinka isdaba jooga ah, magaca galka ay ku jirto iyo iwm dheer, illaa ikhtiyaarrada otomaatiga ah sida isticmaalka metadata ku jira faylasha, sida goobta GPS, taariikhda, waqtiga, nooca kamarada, muraayadaha ... fursado aad u xiiso badan kuwa leh albumyada waaweyn ee sawirada, ama cinwaanka heesta, farshaxanka, albumka ... kuwa leh maktabad ballaadhan oo muusig ah.
In lagu daro xaddidyada loo adeegsanayo dib-u-habeynta waxaan u jiidi karnaa daaqadda «Qaabka», sidaas darteedna magaca faylalkayagu ugu jiraan waxa aan dooneyno. Sidoo kale, maadaama aan ku arki karno natiijada dhinaca midig ka hor inta aan la isbadal ku sameynin feylasha, waan awoodnaa samee dhammaan isbeddelada aan dooneyno inaan ku guuleysano natiijada la doonayo.
Kuwaas waxay raadinayaan natiijooyin aasaasi ah oo dheeri ah, codsigan sidoo kale wuxuu bixiyaa waxay rabaan. Waxaad si fudud u abuuri kartaa liistada kombiyuutarka adoo adeegsanaya tiro lambar dhowr ilbiriqsi ah. Markaad wax walba diyaariso, dhagsii "Samee Magacyada" feylashana waxaa loo magacaabi doonaa en bloc. Waad hore u yeelan kartaa mid maktabad sawir ah oo aan nuqulo lahayn iyo faylal si dhammaystiran loo beddelay.
Codsi aad u fiican oo shaki la'aan ay sifiican u isticmaali doonaan kuwa raadinaya ikhtiyaarrada caanka ah ee horumarsan, gaar ahaan tan iyo markii qiimaheedu sarreeyo, 17,99 euro oo ku jirta Mac App Store. In kastoo sidoo kale laga iibsan karo website-ka rasmiga ah isla qiimahan, anigu kugula talin maayo, maxaa yeelay waxa ku jira oo keliya liisanka hal kombiyuutar, inta ku jirta Mac App Store waad ku rakibi kartaa dhammaan kuwa aad la xiriirtay koontadaada Apple.
Macluumaad dheeraad ah - Nadiifiye Nuqul ah oo loogu talagalay barnaamijka iPhoto, ka saar nuqullada iPhoto
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Mac App Store » Ka Wanaagsan Magac 9, magaca faylasha si otomaatig ah
Maqaalka la daabacay malaha ujeedka ugu yar ee lagu dhiirrigelinayo qof, iyo waxyaabo kale oo ay soo-saareyaashu nala soo xiriiri waayeen ama aan la xiriirnay.
Waxaan u maleynayaa inay ku cadaatay maqaalka inuu yahay qalab qaali ah laakiin leh shaqooyin muhiim ah oo horumarsan oo si dhib yar lagu gaari karo iyada oo loo marayo otomaatiga, sida dib u habeynta iyadoo la adeegsanayo metadata.
Sida iska cad uma maleynayo inay u tahay isticmaaleyaasha kaliya raadinaya magac bedelid caadi ah, laakiin u dhiib sawir qaade leh kumanaan sawir oo ay rabaan inay si sax ah u calaamadeeyaan. -
Aqoonsiga Apple, ka waran haddii aan ilaawno jawaabaha amniga?
Flutter, xakamee codsiyada Mac oo leh tilmaam